DAAWO VIDEO: Hargeysa oo berri banaanbax siyaasadeed ka dhacayo & guddoomiye cirro oo runta u sheegay Muuse Biixi | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Hargeysa oo berri banaanbax siyaasadeed ka dhacayo & guddoomiye cirro...
Guddoomiyaha Xisbiga Wadani, Mudane Cabdiraxmaan Cirro
Hargeysa (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Xisbiga Wadani ee Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Cirro oo maanta Warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa, ayaa ugu baaqay Taageerayaasha Xarunta Xisbiga inay maalinta Berri oo Isniin ah isugu soo baxaan magaalada, gaar ahaan Xarunta Xisbiga.
Mr Cirro ayaa saxaafadda horteeda ka yiri, ‘‘Waxaa cadaatay inaan Muuse Biixi ku hadhin, Wax aan ahayn Muran iyo Garnaqsi aan dhammaad lahayn, Maanta talladu waxay u taalaa Waxgaradka umadda, Waana in la isugu yimaado Madal Qaran‘‘.
Wuxuuna guddoomiye Cirro taageerayaashiisa Xisbiga Waddani ugu baaqay, in maalinta berri ah isugu yimaadaan Xarunta Xisbiga Wadani ee magaalada Hargeysa.
Geesta kale, guddoomiye Cirro ayaa ka Jawaabay Hadalo Sabtidii shalay kasoo yeeray Madaxwayne Muuse Biixi, isagoona tilmaamay inay dumin karaan Somaliland, iyadoo Xisbiga Wadani iyo Taageerayaashii lagu eedeeyay inay Xiririir leeyihiin Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
“ Ummadda waxaan u sheegayaa in Muuse Biixi iyo Gacanyareyaashiisu Arinta DF Soomaaliya u Adeegsadaan ku Cel-Celinta Arinaasi kala Qaybinta Bulshada Somaliland, waxayna arintaasi Sun ku ah Qaranimada Somaliland”, ayuu yiri guddoomiye Cirro.
Haddana qeybta hoose ka daawo Muuqaalka Cirro:
isu soo bax ballaaran
weeraray Muuse Biixi